AFP On Aug 27, 2018
HARARE: Emmerson Mnangagwa was officially sworn in as president of Zimbabwe on Sunday after winning a bitterly-contested election which was the country’s first since the ousting of strongman Robert Mugabe.
Mnangagwa, whose victory in the July 30 polls was challenged by the main opposition, pledged to “protect and promote the rights of Zimb­abweans” at an inauguration ceremony attended by thousands of supporters at a stadium in Harare.
“I, Emmerson Dambudzo Mnan­gagwa, swear that as president of the republic of Zimbabwe I will be faithful to Zimbabwe [and] will obey uphold and defend the constitution of Zim­babwe,” he said to thunderous applause from a crowd that also included several African heads of state.
“We must now focus on addressing the economic challenges facing our nation,” he said. “We are all Zimb­abweans, what unites us is greater than what could ever divide us.
Nicknamed “The Crocodile”, Mna­n­gagwa was appointed after Mugabe was forced out by the military in November last year.